WARARKA BARAAWEPOST Arbaca 3 august 2011<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
XAFLAD LAGU KHATIMAY SALAWAATKA IYO SOO DHAWEYNTA BISHA RAMADAAN
Sida caadadu u ahayd Ahlusunna Waljamaaca, waxay xalay fiidnimadii oo ay Taariikhdu ahayd 28-07-2011, lagu qabtay Magaalada Göteborg, xaflad aad u ballaaran , si heer sare ahna loo agaasime oo lagu soo khatimay ”Salawaatka Rasuulka S.C.W.” oo socday muddo kow & toban bilood, isla markaana lagu soo dhaweenaaye Bisha barakaysan ee Ramadaanka Kariimka ee fodda nagu soo hayso.
Xafladda waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan ee ku abtirsada A.S.W. ee deggan Magaalada Göteborg & agagaarkeeda, ayagoo farxad & rayn-rayn ka muujiyay, waxaana halkaas qasiidooyin ”Nebi – Ammaan” oo aad loo jeclastay lagu qushuucay, laguna maqsuuday ka qaadeen Maadixiin ka mid ah Sheekh Sid Cali iyo Sh.Cabdirahman Maxamed Xaashi iyo Sh. Muse Cali Caddo iyo madiixiin kale.
Isla goobtaas, waxaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxiyidiin Celi ka soo jeediyay wacdi diineed, waano iyo dardaaranba. Sheekhu wuxuu yiri Diintu waa shayga keliya qofka dulman u gaargaarta, kan dhaawacanna qalbigiisa dawaysa, kan quustay rajo iyo yididiilo siisa, kuwa is dilay heshiisiisa, kuwa kala xarig furtay xiriirisa, dhibaatada Adduun & midda Aakhirana raaxo & janno dadka ugu yeerta.
Sheekhu wuxuu yiri Ilaahay markuu diinta kaga hadlayo ”Fitnada” wuxuu sheegay ”Ka baqa fitno nuucoo ay ahaataba maxaa yeelay ma asiibto kuwa ba’anayaasha ah oo qura”. Waxaase nasiib darro ah in fitnadii ay gashay diintii oo ay soo baxeen kooxo ku abtirsanaya diinta islaamka, balse ficilkooda ka hor imaanayo ”Mabaadi’da Islaamka, caqiidada & Cibaadadaba”.
Sheekh Cabdiraxmaan, isagoo wacdigiisa sii wado, wuxuu yiri: Nin ayaa bari wuxuu su’aalay haddii belo dhacdo ”xagee loo cararaa”? Kolkaas ayaa loogu jawaabay ”Masaajidka”. Mar kale haddana wuxuu yiri haddii belo Masaajidka ka dhaco xagee loo cararaa? Waxaase is weydin mudan, kooxdaas oo diinta ku gabanayo, iyaga keligood xaq ku taagan yihiin miyaa? Ummadda inta kalena tahay ”Sindiiqin, Mujrimii, Mulxidiin, Munaafiqii, Kufaar imw”. Saas miyaa?
Goormayse quluubta dadka daalacdeen oo caqiidada qofka ogaadeen?.
Dhinaca xaaladda ka aloosan Soomaaliya, Sheekhu wuxuu yiri ummadda soomaaliyeed waxaa soddonkii sano ee la soo dhaafay soo martay colaad sokeeye iyo shisheeye oo taabsiisay xanuun gundheer, dhaxalsiiyeyna barakac dhuleed iyo bahdil sharafeed, wuxuuna ummadda Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan Waddanka gudihiisa Ilaah ugu baryay in uu ka feeydo dhibaatada iyo murugada, uguna beddelo naxriistiisa & raxmadiisa. Sidoo kale, waxaa Eebbe laga tuugay in Dalka Soomaaliya uu nabad & xasilooni ku soo celiyo, shacbigana u fidiyo nolol ku dheehan tahay bash-bash & barwaaqo.
Waxaa Ilaah looga bariyay in muwaadiniinta Soomaaliyeed quluubtooda uu mid ka dhigo , intii fidno iyo dhibaato ku haayona uu ka qabto, kana badbaadiyo ”fidnadooda, dhagartooda iyo musiibadoodaba”, gaar ahaan kuwii diinteena suuban maanta af duubay, magaceedana ku qaraabtaan,waxna ku dulmiya, kana soo horjeedaan in Dalka Soomaaliya uu xasilo & nabad kuwada noolaashaha shacbiga dhexdiisa.
Gebagebo waxaa lagu ducaystay oo halkaas laga akhriyay ducadii ayMuslimiinta meel kasta ay joogaan, caado ka dhigtay in ay Masaajidaha iyo meelaha kale ee Muqaddaska ah ka akhriyaan, markay musiibo Rabbaani ah ee Ummadda ay asiibto ama ku dhaco. Cutubka ducadaas waa ”YAA ARXAMA RAAXIMIIN, YAA ARXAMA RAAXIMIIN, YAA ARXAMA RAAXIMIIN FARIJ ALLA MUSLIMIIN”.
Allah ha inaga qabto ”Wadaada Seef la boodka” ah ee Bulshada Soomaaliyeed ula dhaqmaya si ka baxsan dhaqan islaam iyo mid bani’aadam . Gef baan galnoo, Guulow Allow noo gargaare ayaa lagu soo khatimay Xafladda.
Ahlu sunnah Wal-Jamaa'ah /Gothenburg-Sweden